Fomba fanao 6 tsara indrindra tokony harahinao rehefa manangana pejy tsy hisoratra anarana | Martech Zone
Nizara antontan'isa vitsivitsy izahay tamin'ny antony mahatonga ny olona tsy hisoratra anarana avy amin'ny mailaka marketinganao na taratasim-baovao. Ny sasany amin'izy ireo dia mety tsy ianao no diso, satria ny mpamaky dia tototry ny mailaka maro ka mila fanamaivanana fotsiny izy ireo. Rehefa mahita sy manindry ilay rohy tsy misoratra anarana ao amin'ny mailakao ny mpanjifa iray, inona no ataonao mba hamonjy azy ireo?
Vao haingana aho no nanao an'izany Sweetwater, tranokala fampitaovana raki-peo izay nahafinaritra niaraha-miasa. Saika nahatsapa ho ratsy aho tamin'ny fipihana ilay rohy tsy nisoratra anarana, saingy tsy dia matetika no mividy matetika amin'ny fifanarahana mailaka tonga isaky ny andro vitsivitsy. Rehefa nanindry ny rohy fisintomana aho dia ity no nitondrana ahy:
Mahafinaritra tokoa izany? Raha tokony hisoratra anarana amin'ny zava-drehetra aho dia nidina fotsiny ny matetika indray mandeha isam-bolana.
Raha tokony hanome isa an'ity pejy ity aho dia mila omeko A +! Tsy vitan'ny hoe manolotra safidy ho an'ny fahita matetika izy ireo, fa mbola manao asa lehibe hampahafantatra ahy izay mety ho tsy ampy amiko ary koa mametraka ny fanantenana amin'ny tsirairay. Izany dia mifanitsy amin'ny navoakan'ny sary Epsilon, Mitety ny Inbox Unsubscribe, mamantatra fomba fanao 6 tsara indrindra tokony harahin'ny mpandefa mailaka rehetra rehefa mifandray amin'ireo tsy misoratra anarana:
Safidy fifandraisana - Mijanona miaraka amin'ny pejy tsy misy famandrihana "rehetra na tsy misy" ary omeo fomba fiasa misy ambaratonga izay manome ambaratonga firotsahana samihafa.
Tsindrio iray-Unsubscribe - aza atao sarotra ny manoratra. Ny fiheverana farany nataonao tamin'ny olona iray nanome anao ny fotoana hiresahana aminy dia tsy ny hampahatezitra azy ireo amin'ny tsy famelana azy ireo handeha.
Hamafana ny famandrihana - haben'ny endri-tsoratra kely, miafina ao ambadiky ny fidirana, manamarina ireo adiresy mailaka… ajanony izay mahatonga azy io ho sarotra ny mahita sy manoratra. Raha te hiala ny olona, ​​avelao izy ireo.
Manadio ny mpamandrika - raha te hihazona ny fametrahana inbox tsara sy ny mari-pamantarana marimaritra iraisana ianao, diovy ny lisitr'ireo mpamandrika izay tsy nandray anjara nandritra ny herintaona (na mihoatra raha vanim-potoana ianao).
Fahasambarana farany - alohan'ny hanadiovanao ny mpamandrika tsy miasa, ataovy ny fotoana farany hanomezana raha te-hijanona izy ireo.
Makà famerenam-baovao - Toy ny ohatra etsy ambony, tsy nandao an'i Sweetwater aho… Tsy dia tiako fotsiny ny mailak'izy ireo matetika. Aza raisina samirery rehefa miala ny mpanjifa. Misafotofoto sy sarotra tantana ny boaty fampidirana anio, mety ho tian'ny mpanjifanao fotsiny ny hitandrina ny zavatra somary milamina kokoa. Raha liana ianao hoe maninona no mijanona dia anontanio izy ireo ao amin'ny pejy famoahana famandrihana.
Mizotra ny Inbox: Aza misoratra anarana
Tags: mailaka matetikaepsilonhatetikamanadio lisitramanadio ny mpamandrikaantony tsy hisoratra anaranaSweetwaterUnsubscribepejy tsy hisoratra anarana
Maninona ny orinasanao no tokony hampihatra resaka mivantana